သခင်လေးရဲ့ကချေသည် Myanmar Version(Completed) - EP38 - Wattpad
တစ်ညလုံး သခင်လေးဘေးမှာထိုင်စောင့်နေခဲ့တယ် အိပ်ပျော်နေတဲ့သခင်လေး မျက်နှာကိုပဲ ကြည့်နေမိသည် မနက်မိုးလင်းထိပေါ့  မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ သခင်လေးစံအိမ်တော်က လူတွေတွေ့ခွင့်တောင်းဆိုပေမဲ့ ခြံထဲတောင် ဘယ်တစ်ယောက်မှ ပေးမဝင်ခဲ့ဘူး
တစ်ချိန်က အင်အားနည်းပါတဲ့ အစေခံကိုး သူတို့လွယ်လွယ် အနိုင်ကျင့်ပြီး သခင်လေးကို ပြန်ခေါ်သွားခဲ့သည် အခုတော့ မရတော့ဘူး ကျွန်တော်ရဲ့ စည်းစိမ်ချမ်းသာအင်အားက အလိုမရှီတဲ့သူကိုခြံထဲတောင် ပေးမဝင်ခဲ့ဘူး လွယ်လွယ်နှင်ထုတ် လာနိုင်ခဲ့သည် တရေးမှမအိပ်တဲ့ ကျွန်တော်ကို ဦးလေး နဲ့ ကျော်စွာက အတင်းအိပ်ခိုင်းတာနဲ့ သခင်လေးကို စောင့်ရင်း အခန်းထဲက ဆိုဖာပေါ်မှာလှဲအိပ်ရင် အိပ်ပျော်သွားသည် ရုတ်တရက် ခေါ်လိုက်တဲ့ အသံကြောင် နိုးလာတော့ သခင်လေး သူသားကိုခေါ်နေတဲ့ပုံ ကျွန်တော်အနီးနားသွားပြီး သခင်လေးကို ခေါ်တော့ ကုတင်ပေါ်ထထိုင်ပြီး မီးဖွင့်ခိုင်းတဲ့ သခင်လေးကို ကျွန်တော် အရမ်းစိုးရိမ်သွားပြီး  သခင်လေးကို ခေါ်နေပေမဲ့ သခင်လေးရဲ့ မျက်လုံး အကြည့်က ကျွန်တော်ဆီမှာမရှီခဲ့ဘူး ကျွန်တော်လိုက်ကာတွေ
" သခင်လေး  အခုအချိန်ကနေ့ခင်းပါ
မမှာင်ဘူး မြင်ရပြီလား  အလင်းရောင်ကို
"နေ့လယ်ပဲရှီသေးတာလား ဒါဆို ငါဘာလို့ဘာမှမမြင်ရတာလဲ "
"  သခင်လေး တကယ် ဘာမှမမြင်ရဘူးလား ကျွန်တော်ကိုကြည့်ပါအုန်း  သခင်းလေးရှေ့မှာ သခင်လေးရဲ့ အစေခံ ရှီနေတယ်လေ မမြင်ရဘူးလား "
" အစေခံတဲ့လား..ငါမင်းကို မုန်းတယ် အရမ်းမုန်းတယ် မင်းကြောင့်..မင်းကြောင့် ငါဘဝကြီး စုတ်ပြတ်သတ်ခဲ့ရတာ မင်းလို့အစေခံကြောင့် မင်းလိုသစ္စာမရှီတဲ့ အစေခံကြောင့်. ..မင်းကြောင့် ....ဒါကိုတောင် အားမရသေးလို့ ကုမ္ပဏီကိုလုပြီး ကျေးဇူးကန်းတဲ့ကောင် ... မုန်းတယ် .. .မုန်း. ..."
" သခင်လေး..သခင်လေး "
ပြောရင်းမေ့လဲသွားတော့သခင်လေးကို ရင်ခွင်ထဲဆွဲသွင်းလိုက်ပြီး  ကျော်စွာကို ဆရာဝန်ခေါ်ခိုင်းလိုက်သည်  ဆရာဝန်ကိုစမ်းသပ်ခိုင်းတော့ စိတ်ခံစားမှုပြင်းထန်တိုင်း အမြင်အာရုံ ချို့တဲ့ ပြီး စကားမပြောနိုင်တာထိ ဖြစ်တက်တယ်လို့ပြောသည်